January 2016 - BuzzFeed Myanmar
Gym တစ်နာရီကစားခြင်းနဲ့ ဝိုင်နီတစ်ခွက်သောက်ခြင်း အာနိသင် တူညီနေ
အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းမသွားဖို့ အချိန်မရှိသူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဝိုင်နီတစ်ခွက် သောက်သုံးခြင်းနဲ့ တစ်နာရီလောက်အားကစားလုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးအာနိသင် အတူတူပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ကနေဒါမှာရှိတဲ့ အယ်လ်ဘာတာတက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဒီအဖြေထွက်လာခဲ့တာပါ။ ဝိုင်နီမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်သတ္တိက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အားကစားခန်းမှာ တစ်နာရီလောက် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ပြီး ရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ အတူတူဖြစ်နေတာပါ။ ကိုယ်ကာယစွမ်းဆောင်ရည်၊ နှလုံးလည်ပတ်မှုနဲ့ ကြွက်သားသန်မာမှု စတဲ့ နေရာတွေမှာ ဝိုင်နီတစ်ခွက်သောက်တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ အတူတူဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ တစ်နေ့ကို ဝိုင်နီတစ်ခွက်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း နည်းပါးစေပြီး ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုလည်း ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (Duwun)
ကြက်သွန်ဖြူကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရာမှာ ကူညီပေး
ကြက်သွန်ဖြူကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးတွေဟာ သွေးလွှတ်ကြောနဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှု ရာနှုန်းတွေကို လျှော့ကျစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဆိုအရ နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး စားသုံးသူတွေမှာ သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းအညစ်ကြေးတွေစုပုံမူ သိသိသာသာ လျော့ကျလာတာကို တွေ့ရှိရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လေ့လာမူတွေအရတော့ သုသေသနပြုသူများဟာ ဇီဝဗေဒလက္ခဏာတွေကိုစစ်ဆေးထားတဲ့ နှလုံးရောဂါစဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေ့ရှိပြီး အသက် ၄၀မှ၇၅နှစ်အတွင်းရှိတဲ့လူနာတွေကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ သွေးကြောများထဲတွင် ကယ်လ်ဆီယမ်အနည်ကျခြင်းနှင့် သွေးခဲများစုပုံလာခြင်းကို တိုင်းတာပြီးနောက် သုသေသနပြုသူတွေက နေ့တိုင်း ကြက်သွန်ဖြူမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ၂၄၀၀မီလီဂရမ် တိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ သုသေသနပြုပြီးနောက် ကြက်သွန်ဖြူမှထုတ်လုပ်ထားသောဖြည့်စွက်ဆေးဝါး သောက်သုံးတဲ့သူတွေမှာ သူတို့ရဲ့သွေးကြောတွင်းရှိ သွေးခဲများဖြစ်ပေါ်မူနှုန်း ၈၀ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရှိရပြီး ရှိနေတဲ့သွေးခဲတွေဟာလည်း လျော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ “ ဒီလေ့လာမှုက နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ သွေးခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ရှိပြီးသားသွေးခဲများတိုးပွားလာခြင်းကို လျော့ကျစေတဲ့ ဖြည့်စွက်အစားအစာရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ပြသလိုက်တဲ့နောက်ထပ် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် “ […]
လက်ထပ် လက်စွပ်ကိုဘာကြောင့် ဘယ်ဖက် လက်သူကြွယ် မှာ ၀တ်ဆင်လေ့ရှိတာလဲ ?
ယနေ့ခေတ်လူတော်တော်များများနဲ့ လူငယ်အများစု မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းမှာလက်ထပ် လက်စွပ်ကို ဘယ်ဖက် လက်သူကြွယ် မှာ ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လက်မှာ ၀တ်ဆင်ကြလဲ ? ဘယ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကဆင်းသက်လာသလဲ ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိနေကြပါတယ်…….အဲ့ဒီ့ အယူအဆ က လုတွေရဲ့ခန္မာကိုယ်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ် ဟာ အမှန်တကယ်လည်ပတ်လှုပ် ရှားနေတာကို စတင်တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းက စတင်ခဲ့တယ်…တွေ့ ရှိချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ၁၆ ရာစုလောက်က စတင်ကာ …..လူ့ခန္ခာကိုယ် မှာ ရှိတဲ့ နှလုံးက သွေးကြောအားလုံးဟာဘယ်ဖက် လက်သူကြွယ်ဆီ ကို ပဲ ဆက်သွယ် စီးဆင်းလည်ပတ်နေ လို့ဖြစ်ပါတယ်……ဒါကြောင့် နှလုံးသားနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေတဲ့ ဘယ်ဖက် လက်သူကြွယ် မှာလက်ထပ် လက်စွပ် (သို […]
၁။ ကြားဖြတ်ပြောခြင်းမရှိပဲ ခံစားချက်ကိုနားထောင်မယ်။၂။ စွပ်စွဲပြောခြင်းမရှိပဲ ပြသနာကိုဖြေရှင်းမယ်။၃။ ငြင်းခုန်ခြင်းမရှိပဲ ပြသနာအဖြေကိုရှာမယ်။၄။ ချွေတာလျှော့နည်းခြင်းမရှိ ပေးဆပ်ကြမယ်။၅။ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိပဲ နှစ်ကိုယ်တူနေရဖို့ဆုတောင်းမယ်။၆။ ဟန်ဆောင်မူမရှိပဲ မျှဝေခံစားကြမယ်။ရ။ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ပျော်ရွှင်စွာချစ်သွားမယ်။၈။ ယုံမှားသံတယမရှိပဲ ယုံကြည်မူထားရှိရမယ်။၉။ ထိခိုက်နာကျင်မူမရှိနားလည်းခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်။၁၀။မေ့လျော့ခြင်းမရှိပဲ ကတိစကားကို တည်ရမယ်။ မင်းအလင်္ကာ
တစ်နေ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကလေဖြတ်သွားပါသတဲ့။ အသက်အန္တာရယ် မစိုးရိမ်ရပေမဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း တစ်ခြမ်းလုံး လှုပ်လို့မရတော့အတွက် အရမ်းစိတ်ဓါတ်ကျပြီး သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက လူမမာသတင်းမေးရင်း အားပေးစကားပြောကြားပေးကြတာပေါ့။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူစိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး အားပေးစကားတွေပြောကြားတော့ ၊ သူက သူအကြောက်ဆုံးက ခုချိန်မှာ သူ့မိန်းမက သူ့လိုလူနာကိုပစ်သွားမှာကိုကြောက်လွန်းလို့ ပိုပြီးစိတ်ဓါတ်ကျရပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလိုပြောပြီးသိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ တကယ်ပဲ မိန်းမဖြစ်သူက သူ့ကိုပစ်သွားပါတယ်။ အပေါင်းသင်းတွေက သူအရမ်းဝမ်းနည်းလို့ သွားပြီးအားပေးစကားတွေနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အခါ သူက သူ့အမှားတွေကြောင့် သူမဒီလိုထွက်ခွာသွားရတာကို အပြစ်မတင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းနောင်တရမိပါတယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ … သူမ အိမ်မှု ကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်နေတိုင်း သူဟာ အခန့်သားနဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်လိုက်၊ အခွေကြည့်လိုက်၊ ဂျာနယ်ဖတ်လိုက်၊ ရုံးအလုပ်လေးတွေလုပ်လိုက်နဲ့ သူမကို မကူညီခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူမနေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းသွားပြရင်း အလုပ်ကနေပြန်ထွက်လာဖို့မကြိုးစားမိပဲ […]
လက်သည်း အလှပြင်တဲ့ ကိုလမ်ဘီယာသားများ
ကိုလမ်ဘီယာနိုင်ငံ မြို့တော် ဘိုဂိုတာရှိ အကျဉ်းထောင် တစ်ခုတွင် ခြစားမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ မသမာမှုများဖြင့် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသည့် အမျိုးသားများသည် လက်သည်း ခြေသည်း အလှပြင် ဆရာတစ်ဦးကို အကျဉ်းခန်းများထဲသို့ ခေါ်ယူခဲ့သည်။ အကျဉ်းသားများ၏ လက်သည်း အလှပြင်မှု သတင်း စက်တင်ဘာလတွင် လူသိရှင်ကြား ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပြီးနောက် ကိုလမ်ဘီယာ နိုင်ငံသားများ မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အကျဉ်းသားများအား အထူးအခွင့် အရေးပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူများ မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းကြီးများ တန်မဲ့ အလှပြင်ခြင်းကြောင့်တော့ မဟုတ်။ အကြောင်းမှာ ကိုလမ်ဘီယာတွင် အမျိုးသားများ လက်သည်း အလှ ပြင်ခြင်းသည် ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ် မဟုတ်သောကြောင့်ပင်။ ကြမ်းပေးရမ်းပေ့ ဆိုသည့် စစ်သားများလည်း လက်သည်း […]
ကိုယ့်ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်မိရင် သူကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာရိုးသားနေတယ်ဆိုတာသိတယ် ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကတော့ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရပါဘူး… ကိုယ်နဲ့အဆက်သွယ်ခဏလေးမရတဲ့အခါ သူ့အခက်ခဲနဲ့သူဆိုတာနားလည်ပါတယ် ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်စိတ်ပူမိနေတတ်ကြပါတယ်… ပြသနာအသေးမွှားလေးတစ်ခုပါပဲ ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲတွေးမိပါတယ် ဒါပေမဲ့အရမ်းကြီးကျယ်တဲ့ပြသနာကြီးတစ်ခုလိုတွေးနေတတ်ပါတယ်…(ပြီးတော့လဲ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး)… တစ်ခါတစ်လေသူအလုပ်ရူပ်နေတယ်ဆိုတာသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ခံချင်တဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအလိုမကျသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်…(သူ့ဆီကလေပြေလေးနဲ့ဝင်လာရင် ပျောက်သွားတတ်ပြန်ရော)… နားလည်မှုအလွဲလေးတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါတိုင်းဘာမှမဟုတ်တာကို ဟိုးတွေးဒီတွေးတွေတွေးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်နာကျင်ခံနေတတ်ကြပါတယ်… Phoe Phyu
၁။အ်ိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ဖုန်းဆက်တတ်သူ၂။လမ်းမပေါ်မှာ ဖုန်းဆက်တတ်သူ၃။အလုပ်ချိန်မျာ ဖုန်းဆက်တတ်သူ၎။အိပ်ယာမဝင်ခင်မှာ ဖုန်းဆက်တတ်သူ၅။ဆက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းဆက်တတ်သူ အခုပြောခဲ့ တဲ့ အမျိုးအစား(၅)မျိုး ထဲမှာ…သင်က ဘယ် အချက်နဲ့ ကိုက်ညီသလဲ ဆိုတာ ၁။အိပ်ယာနိုးနိုးချင်းဖုန်းဆက်တတ်သူ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် သင်ဟာ အရမ်းလှုပ်ရှားတတ်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာအခွင့်ကောင်းနဲ့ကြုံရင်လက်မလွတ်တတ်သူဖြစ်တယ်။အချစ်စစ်သူရဲကောင်းအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အချစ်အတွက်ပျော်ပျော်ကြီးစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရဲသူဖြစ်တယ်။ချစ်သူဆီကဘာမှမမျှော်ကိုးပဲပေးဆပ်သူ ချစ်သူကျေနပ်အောင်ကြင်နာသူ ချစ်သူဆီကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရလည်းအပြစ်မတင်ပေးဆပ်တတ်သူဖြစ်တယ်။အချစ်မှာသင်ဟာပျော်နေတတ်ပေမယ့်အကြံတစ်ခုတော့ပေးချင်ပါတယ်။ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ကြင်နာမှုဟာ….ချစ်သူအတွက် အကျင့်ဖြစ်မသွားစေပါနဲ့။ချစ်သူဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပေးအယူညီမျှဖို့လိုတယ်။သင့်အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးသူကလည်း သင့်ကို ကြင်နာတဲ့သူ…သင့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ၂။လမ်းမပေါ်မှာဖုန်းဆက်တတ်သူ အချစ်ကြောင့်အရသာမပျက်သူ ၊ ဘဝမှာပျော်ပျော်နေတတ်သူ ဖြစ်ပြီးအချစ်မရှားသူဖြစ်ပါတယ်…။ဘဝရဲ့ထောင့်တစ်နေရာကနေကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတတ်သူဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ အပြောအဆိုကို အလွန်ဂရုစိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်။ချစ်သူဘာကိုအလိုရှိသလဲဆိုသင်သိဖို့အတွက် အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။သင်ဟာစန်းပွင့်သူဖြစ်ပေမယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သတ်မှတ် ချစ်တဲ့ အချစ် ကမှသင် နဲ့ အသင့်တော် ဆုံး ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့စိတ် တစ် စိတ်ထဲနဲ့ လူအများကိုခွဲဝေပေးဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။။ ၃။အလုပ်ချိန်မှာဖုန်းဆက်တတ်သူ သင့် အချစ်ဟာ အချစ်ရိုးကြီးပါ။ရိုမန်တစ် မဆန် သလို နာဝင်ချိုတဲ့စကားကိုလည်းပြောခဲသူ ဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ဆိုတာဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထင်သူဖြစ်ပါတယ်။ […]
မိန်းကလေးများအတွက်ပါ မိမိချစ်သူက မိမိကိုတကယ်ချစ်မချစ်တွက်နည်းလေးပါ
(မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဆန်းနည်းပါ။) မိန်းကလေးတွေ အတွက် သီးသန့်ပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီး သား မိန်းကလေးတွေချစ်စကား ကမ်းလှမ်းခံရတာ ၊ လက်ထပ်ခွင့် ပန်တာတွေ ရှိလာတတ် ပါတယ် ။ရင်ခုန်ရတာ တစ်ဖက် ကြည်နူးရတာ တစ်မျိုးနဲ့ နောက်ဆုံး တကယ်ချစ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေက ဖြစ်လာ ရစမြဲပေါ့ ။ ဒီပညာလေးက လွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လျှော့မတွက်ပါနဲ့ ။ တကယ်မှန်တာ ။ ကဲ တကယ်ချစ် မချစ် တွက်စစ် ကြည့်မယ်နော် *အဆင့် (၁)* ကိုယ့်ကို ချစ်စကား လာပြောတဲ့ သူရဲ့နာမည် အပြည့်အစုံကို ဗေဒင်သင်္ချာ ဂဏန်းတွေ အဖြစ် ပြောင်းပါ ။ ဗျည်းကိုသာယူပါ ။ အမည်ဗျည်း ဗေဒင် သင်္ချာဂဏန်း အ ၊ ဥ […]